ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ click
- တာဝန်သိ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း click
- ပြင်ဦးလွင်မှာ လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆုံရတာ အံ့သြ၀မ်းသာရကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ပြောကြား click
- မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဖို့ တရုတ်ကုမ္ပဏီကို ၈၈ တိုက်တွန်း click
- ကချင်စစ်ပွဲ သေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ရန်ကုန်မှာ လမ်းလျှောက်ဆုတောင်း click
- ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်ပွဲ click
- ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ ဆုတောင်း click
- ၂ နှစ်ပြည့် ကချင်စစ်ပွဲအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲနှင့် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်း လှုပ်ရှားမှု (ဓာတ်ပုံ) click
- ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက် သရုပ်ဖော်အနုပညာ ပြသလှုပ်ရှား click
- မလက်တို လယ်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဖမ်းဆီးခံရ click
- ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ click
- လှိုင်သာယာမှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေ စုပေါင်း ဆန္ဒပြ click
- အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်တွေ ပေါ်ထွက်ရေးနဲ့ အလုပ်သမားဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရေး (တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်း) click
- မလေးရှားမှာ ရခိုင်တချို့ တိုက်ခိုက်ခံရ click
- သမ္မတရာထူး သတ်မှတ်ချက် အာဏာသုံးပြီး ပြင်လို့မရဟု ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား click
- ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ SSA (တောင်ပိုင်း) ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ နေပြည်တော် ထွက်ခွာ click
- ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်း သမ္မတ တာဝန်ယူဖို့ ဆန္ဒရှိ click
- နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဖြစ်လိုတယ်လို့ သူရဦးရွှေမန်းကလည်း ပြောကြား click
- ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းနှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်သားဟောင်း ကိုကိုလေးနှင့်အဖွဲ့က လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရရွှေမန်းကို ဆန်ဖရန်တွင် ကြိုဆိုပြီး တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည် click
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ ပြည်သူတွေအပေါ် မူတည်တယ်လို့ ကိုကိုကြီး ပြော click
- နယူးယောက် မြန်မာမိသားစုနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံ click
- နယူးယောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တို့ကို ကြိုဆိုတွေ့ဆုံ click
- ၈၈ နဲ့ မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ အလုပ်သမားတွေဘက်က အခမဲ့ ကူညီမည် click
- ထားဝယ်စီမံကိန်း နစ်နာသူများအရေး ထိုင်းအစိုးရထံ တင်ပြမည် click
- ရေးခဲ့မိသော မှတ်တမ်းများ – အပိုင်း (၂၇) click
- လွဲတတ်သူတို့ ဖတ်ဖို့စာ (ဆောင်းပါး) click
- အင်တာနက် လွတ်လပ်မှုနဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာ - အပိုင်း (၂) click
- သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဒီနှစ် အဖြစ်များနိုင် click
- ဗန်ကူးဗား ရန်ပုံငွေဂီတပွဲ မြန်မာပြည်တွင်းက ချို့တဲ့ကလေးငယ်များ ပညာရေးအတွက် လှူမည် click
- အဖေများနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဦးသုခ ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲ click
- Man U ဘောလုံးအကျော်အမော်တွေ ရန်ပုံငွေပွဲ ဝင်ကစား click
- လစ်ဗျား စစ်ဦးစီးချုပ် ရာတူးက နှုတ်ထွက် click
- ထောက်လှမ်းရေး သတင်းပေးသူ အမည်ဖွင့်ထုတ် click
- တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ အင်တာနက်တိုက်ခိုက်မှု ကာကွယ်ရေး သဘောတူ click
- ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ စစ်မဲ့ဇုန်မှာ တွေ့ click
- ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်စမယ် click
- သီရိလင်္ကာရေဘေး click
မလေးရှား အစိုးရကမြန်မာ တွေအပေါ်လုပ်ဆောင်နေတာနေတာနဲ.
ပါတ်သက်လို. မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေက မျက်ခြေမပြတ်
မလေးရှားက.. ရွှေ .. များ အမြန်ပြန်လာဖို. တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ။
ဥစ္စာ .. ကံစောင်. ။
အသက် .. ဥာဏ်စောင်. ပါ ။